UOlalla Garcia. Udliwanondlebe nombhali we «Pueblo sin rey» | Uncwadi lwangoku
UOlalla Garcia. Udliwanondlebe nombhali we «Abantu ngaphandle kokumkani»
UOlalla Garcia. Ifoto yewebhusayithi yakho.
UOlalla Garcia Ungumbhali weenoveli zembali ikakhulu. Uzalelwe eMadrid, wafunda iMbali kwaye uhambe amaxesha amaninzi eSpain naseYurophu de wazinza eAlcalá de Henares. Phakathi kwezihloko zakhe ezipapashiweyo kukho Umyezo waseHypatia, uMasifundisane weeNcwadi ezingavumelekanga okanye abantu abangenankosi, Okokugqibela. Namhlanje ndipapasha olu dliwanondlebe kunye naye apho athetha nathi kwiincwadi zakhe azithandayo ukuya kwiprojekthi yakhe yamva nje. Ndilixabisa kakhulu ixesha lakho, ububele kunye nokuzimisela.
U-OLALLA GARCÍA: Inyani yile andikhumbuli. Ndafunda ukulesa ndineminyaka emine, ngoko nangoko ndaqalisa Bhala izigcawu ezincinci kunye namabali qamba. Kwimemori yam, bendifunda kwaye ndibhala ngonaphakade.
I-OG: Ibali elingenasipheloNgu-Michael Ende. Ndayifunda xa ndandineminyaka elishumi ubudala, yaye, ixesha elide, yayiyeyona nto ndiyithandayo. Kutheni le nto indichaphazele kangaka? Kungenxa yokuba iyincwadi nje emnandi.
I-OG: Baninzi ababhali endibathandayo, ngokuqinisekileyo, kodwa Andinayo intandokazi. Ndifunde ababhali beentlanga ezininzi, ngamazwi ahlukeneyo kwaye avela kuzo zonke iindawo. Abukho ubutyebi obungaphezu kokwahluka.
I-OG: Sonke sinokufunda kunye nabalinganiswa abasiphawulayo, kwaye singathanda ukudibana nabani. Uncedo lwam olukhulu njengombhali kukuba ndinokubhala malunga neembali ezoyikekayo, endizithandayo, kwaye ke, ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, ndihlale nazo. Umzekelo, ifilosofi enkulu kunye nososayensi IHypatia yaseAlexandria, apho iinoveli zam zijikeleza khona.
I-OG: Ndiye ndakuqhela ukubhala nokufunda naphi na. Kwizithuthi zikawonke-wonke, kwigumbi lokulinda leziko lezempilo… ndiphethe incwadana yokubhala kunye nam ukubhala phantsi izimvo okanye amabinzana athi qatha engqondweni. Kuya kufuneka uthathe ithuba lokuphefumlelwa naphi na apho iza kuwe.
I-OG: In ekhaya, ngoxolo lwengqondo kunye nendebe elungileyo ye iti ecaleni kwe.
AL: Sifumana ntoni kwinoveli yakho yamva nje, Idolophu engenankosi?
I-OG: Ibali malunga nokuvuka kwabantu abaqhelekileyo. Sisiganeko sembali esibaluleke kakhulu: ixesha lokuqala apho abantu baziva bezimele geqe bavukela iminqweno kakumkani.
AL: Ezinye iintlobo ozithandayo ngaphandle kwenoveli yembali?
I-OG: Njengoko benditshilo ngaphambili, ndicacile. Ndifunde yonke into. Ukwenzela mna, ezo ntlobo zelebheli nje yokuthengisa, engandichaphazeliyo kwaphela. Inoveli elungileyo yenye yodwa, kwaye inokulingana kulo naluphi na uhlobo. Enye embi, nayo.
I-OG: uLeo maxwebhu Malunga nomntu wembali endibhala ngobomi bakhe: UMaria Pacheco, uluntu lwaseToledan. Ungumntu onomdla, onebali elihle alibalisayo, kwaye ngubani ongakhange alufumane uhoyo olumfaneleyo.
I-OG: Inzima. Ngokwenyani, intengiso yokupapasha ipapasha izihloko ezininzi kunokuba ubuninzi babafundi bunokuyifumana, kwaye indawo enkulu ihlala kwizithunzi kuba ayonwabisi umkhankaso wentengiso owaneleyo. Ngelishwa, kukho ababhali abakhulu abahlala bengashicilelwanga, okanye ezincwadi zabo zigqitha kwiishelufa zevenkile zeencwadi ngaphandle kwentlungu okanye uzuko kuba azingonondaba baneleyo.
I-OG: Kubonakala kunzima kuye wonke umntu, kodwa Kuya kufuneka uzame ukufumana icala elifanelekileyo. Ubomi bungwevu kakhulu ukuba sibusondela ngaphandle kwethemba. Ukwenzela mna, Ndihlala nabahlobo abangqine ukuba bayinyani, kunye nabamelwane kunye nabantu abangaziwayo abaye baphethukela ekuncedeni abo basweleyo. Ewe ndinethamsanqa lokuba nabantu abanjalo ngeenxa zonke. Umnqweno omhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » UOlalla Garcia. Udliwanondlebe nombhali we «Abantu ngaphandle kokumkani»